Taliska Booliska oo shaaciyay khasaaraha ka dhashay Qaraxii Luul Yemeni – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Afhayeenka Booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay Qarax gaari loo adeegsaday oo xalay fiidkii lala beegsaday Maqaayadda Luul Yemeni oo ku taalo degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir.
Qaraxa dhacay ayaa sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah oo maqaayadda ku sugnaa, waxaana sidoo kale jira guryo soo dumay oo khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed dhaliyay.
“Khasaaraha meesha ka dhashay waa 10-dhimasho ah iyo sodomeeyo dhaawac ah sida aan tirada ku heyno,” ayuu yiri Afhayeenka Booliska Soomaaliyeed oo goobta qaraxa uu ka dhacay warbaahinta kula hadlayay.
Sidoo kale, Sadiiq Aadan Cali ayaa ku tilmaamay gaariga qaraxa lagu fuliyay Mootada nooca xamuulka qaada oo lagu weeraray maqaayadda Luul Yemeni oo ay xiligaas ka cunteynayeen dad shacab ah.
Weerarka ayaa ku soo aaday xilli fiid ah oo shacab Soomaaliyeed oo waxba galabsan ku qaxweynayeen maqaaxida, wuxuuna weerarkan qeyb ka yahay ficilada gurracan ee argagixisadu ay ku doonayaan in ay ku damiyaan iftiinka iyo horumarka u bidhaamay ummadda Soomaaliyeed.